Dr.Farole oo ka qaybgalay Olole 12 Dec 12, 2012 - 3:17:22 AM
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr,Cabdiraxman Maxamed Farole ayaa maanta 12 December,2012 kaga qaybgalay Hotel Panorama magaalada Bossaso xaflad la isku wacyigelinayey dhibaatada Gudniinka Fircooniga uu hablaha u geysto laguna joojinayo guud ahaan deeganada Puntland.
Ku xigeenka gudoomiyaha Barlmanka ,Warfaafinta ,Salaad Xareed Cali ,wasiirada Haweenka ,Cadaalada ,Caafimaadka ,Amniga ,Arrimaha gudaha ,Beeraha ,saraakiisha UNICEF ,Save The Children ,UNOCHA ,Daladaha Haweenka iyo dhlinyarada gobolka Bari iyo marti sharaf kale ayaa ka qaybgalay munaasabadan balaaran.
Khudbado kala duwan ayaa laga soo jeediyey xaflada oo diirada lagu saarayey dhibataada Gudniinka Fircooniga islamarkaasina looga dhawaaqey Ololaha Saxarla ee joojinta FGM-ka ,waxana isla madasha laga jeediyey suugaan kala duwan oo soo bandhigtey Kooxda Waaberi Puntland.
Wasiirada Haweenka Puntland Xaliimo Xasan Xaaji ayaa hadalo kooban ka jeedisey xafladan oo ku booridey culimada diinta inay ka qayb qaataan ololahan lagu joojinayo gudniinka gabdhaha,iyadoona mid ka mida caruurta Bossaso madaxweynaha gudoonsiisey Koofiyad iyo warqada ololahan.
Dhankiisa ayuu wasiirka Cadaalada Puntland Dr,Cabdi Khaliif Xasan Xaaji Ajaayo soo jeedshey in shaqo loo abuurey haweenkii ka ganacsan jirey gudniinka Gabdhaha si qayb uga noqoto ololahan lagu joojinayo gudniinka Fircooniga.
Madaxweynaha Puntland Dr,Cabdiraxman Maxamed Farole ayaa ku dheeraadey Gudniinka Fircooniga ,taariikhdisa iyo weliba go’aan ay horey xukuumaddu soo saartey oo ah joojintiisa kaasi oo aan lagu dhaqmin.
‘’Sharcigii ugu horeeyey anagaa ka soo saarney gudniinkan Somalia hadaba waa inaad waantoodaan oo walidiintu ka joojiyaan caruurtooda’’ ayuu yiri Dr.Farole.oo raaciyey Ciqaab in la marsiinayo cidii lagu ogaado inay gudo gabdhaha.
Mahad ayuu u jeediyey Dr.Farole dhamaan intii ka soo shaqeysey barnaamijka oo ugu horeyso Wasaarada haweenka iyo cadaalada iyo weliba hayadaha UNICEF iyo Save The Children.
Boorar iyo finaando lagu soo xardhey erayo ka dhan ah gudniinka Fircooniga ayaa ka soo qaybgalayaasha loo qaybshey ,waxana haweenku ahaayeen kuwo maqsuud si gaar ah ugu ahaa imaatinka madaxweynaha iyo sida uu arimahooda uga shaqeynayo.
Halkan ka dhageyso Khudbada uu ka jeedshey Xaflada Madaxweynaha More Articles